BIG NEWS: Xasan Daahir Aweys oo warar cusub laga Helay - iftineducation.com
BIG NEWS: Xasan Daahir Aweys oo warar cusub laga Helay
aadan21 / August 16, 2016
iftineducation.com – Xasan Daahir Aweys oo Saraakiisha Al Shabaab ka mid ah welina aan ku dhawaaqin inuu ka baxay mabda’ii Al Shabaab hase ahaatee Dawlada Labo Sano ay gacanta ku heyso ayaa warar cusub laga helayaa.
Inkastoo Xasan Daahir Xabsi guri ku yahay guri Dawlada Soomaaliya kireysay kuna yaalla Meel udhaw Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lasoo seegayaa in xaaladiisa caafimaad hadda laga deerinayo.
Hogaamiyihii Hore Ee Ururka Xisbul Islaam Sheekh Xasan Daahir ayaa la sheegay in Xanuun uu soo foodsaaray Isbuucyadii udambeysay kuna saabsan Cudurka Macaanka (Sonkorta).
Daawooyin ayaa lagu siiyaa guriga uu Xabsiga ku yahay,iyadoo qaar ka mid ah Eheladiisa ay sheegeen in loo diiday gurigaasi inay ku booqdaan oo ay soo arkaan Xaaladiisa Caafimaad.
Dawlada Soomaaliya ayaa hore waxay iskugu dayday in la khaarajiyo Xasan Daahir maadama looga caal waayey wax war ah inuu ka bixiyo mowqifkiisii Shabaabka iyo waxa uu hadda aaminsan yahay.
Waddanka Qatar ayaa Shan bil ka hor isku diyaarinayey inuu magan galyo siiyo Sheekh Xasan Daahir Aweys waxaase ka diiday Dawlada Soomaaliya oo war cad weli ka helin wadaadkaan mayalka adag.
Mr Aweys ayaa waxa uu ka mid yahay dadka faro ku tiriska lagu sheego ee macangaga waxa Soomaalidu utaqaano ama hal adeegaku caan baxay,Shirqoolkii Dawlada Soomaaliya umaleegtayna waxay ka baqdday in Beesha Aweys inay ogaato oo qalalaase Abuuraan.
Sheekh Muuse Daahir Aweys oo ah Daaci Soomaaliyeed oo fidinta Diinta ku caan baxay islamarkaana ay wada dhasheen Xasan Daahir Aweys ayaa kula taliyey Walaalkiis inuu yiraahdo aniga Al Shabaab maahi oo waan ka baxay si magan galyo dal kale oo Carabta ah iskaga aado,hase ahaatee Xasan Daahir weli kama dhaadhicin juujuub in warkaasi uu saxaafada ka hor yiraahdo.
Bishii June Sanadkii 2014-kii Xilli Maqrib ah ayaa Diyaarad ka keentay Cadaado Xasan Daahir iyo Xubno kale oo markaasi baxsad iyagoo ah lagu qabtay Duleedka Cadaado ilaa xilligaasna Dawladu maxkamad masoo saarin Xasan Daahir iyo Shakhsiyaadka La socdo,lamana oga sababta xilli Xasan Xanafi Xaaji oo Shabaabka katirsanaa Tiirka la geeyey oo bilo la hayey kadib la toogtay.
gabdhaha afka kala qaado marka lawasaayo
xiliga galmada dhawaqa kasoo baxa xubinta taranka